Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Afrika COVID-19 Dhimashadu aad ayey u kordheysaa
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Nidaamyada caafimaad ee aan haysan agab aad u liita ee dalalka Afrika ayaa waxaa soo food saaray gabaabsi aad u daran shaqaalaha caafimaadka, sahayda, qalabka iyo kaabayaasha loo baahan yahay si loogu bixiyo daryeel bukaanno aad u xanuunsan COVID-19.
Dhimashada COVID-19 ayaa kor u kacday in kabadan 40 boqolkiiba usbuucii hore, oo gaartay 6,273, ama kudhowaad 1,900 in kabadan usbuucii hore.
Dhimashadii ugu dambaysay, ama boqolkiiba 83, waxay ka dhacday Namibia, Koonfur Afrika, Tunisia, Uganda iyo Zambia.
Wadamada Afrika ayaa wajahaya gabaabsi dhanka oksijiinta ah iyo sariiraha daryeelka degdega ah.
Dhimashada ayaa sii kordheysa iyada oo isbitaalada la dhigaayo ay si xowli ah usii kordhayaan iyadoo wadamada Afrika ay wajahayaan gabaabsi dhanka oksijiinta ah iyo sariiraha daryeelka degdega ah.
Tirada ayaa kaliya ka xishooneysa 6,294 ugu sarreysa, oo la diiwaangeliyey Janaayo.
Gaaritaanka 'barta jabinta'
“Dhimashadu aad bay kor ugu kacday shantii toddobaad ee la soo dhaafay. Tani waa calaamad digniin ah oo cad oo muujinaysa in isbitaalada wadamada ugu saameynta badan ay gaarayaan meel jabitaan, ”ayuu yiri Dr Matshidiso Moeti, Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) Agaasimaha Gobolka ee Afrika.
"Nidaamyada caafimaad ee aan haysan agab aad u liita ee dalalka Afrika waxay wajahayaan gabaabsi aad u daran shaqaalaha caafimaadka, sahayda, qalabka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee loo baahan yahay si loogu fidiyo daryeelka bukaannada aadka u xanuunsan ee COVID-19."
AfricaHeerka dhimashada ee kiisaska, taas oo ah saamiga dhimashada ee kiisaska la xaqiijiyay, waxay taagan tahay 2.6 boqolkiiba marka loo eego celceliska adduunka ee 2.2 boqolkiiba.